Ministiroonni dhimma alaa fi bishaanii Ityoophiyaa, Gibtsii fi Sudaan preezdaant Doonaald Traamp waliin mari’atan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Ministiroonni dhimma alaa fi bishaanii Ityoophiyaa, Gibtsii fi Sudaan preezdaant Doonaald Traamp waliin mari’atan
On Jan 15, 2020 82
Finfinnee, Amajjii 6, 2012 (FBC) – Ministiroonni dhimma alaa fi bishaanii Ityoophiyaa, Gibtsii fi Sudaan preezdaantii Ameerikaa Doonaald Traamp waliin mari’atan.
Marichi waltajjii ministiroota dhimma alaa fi bishaanii Ityoophiyaa, Gibtsii fi Sudaan taasisaa jiraniin cinaatti kan gaggeeffame ta’uu Ameerikaatti Ambaasaaddarri Ityoophiyaa Fitsuum Araggaan ibsaniiru.
Ministiroonni biyyoota sadanii dhimma Hidha Haaromsaarratti Ameerikaa Waashiingitanitti mari’achaa jiru.
Biyyoonni sadan marsaa addaddaatin dhimma hidhichaarratti mari’achaa turuun ni yaadatama.
Guutinsaa fi gadilakkisa bishaaniirratti kan mari’atan yammuu ta’u, marii marsaa 4ffaa dhiyeenya taasifameen Gibts guutinsa bishaaniirratti yaada haaraa qabattee dhiyaachuu isheetin waliigaltee malee goolabamuun isaa ni yaadatama.
Mariiwwan amma ammaa gaggeeffaman waliigaltee malee goolabamuu isaanii gamaaggamuuf Waashiingitanitti mari’achaa jiru.
Yuunivarsiitiin Walloo fi Dabra Taaboor barattoota digirii lammaffaan barsiisaa turan…
Bara baajata 2013tti dargaggoota kuma 200 fi kuma 80f carraa hojii uumuuf hojjechaa…
Naanno Affaaritti balaa lolaa laga Awaashiin namoonni kuma 49 fi 65 miidhaman
Komishiniin Too’annaa fi Inispeekshinii Giddugala Paartii Badhaadhinaa magaalaa…
Shakkamaan yakka ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamee…
Manni murtichaa obbo Jawaar fi Baqqalaa dabalatee…
Shakkamtoonni dabalataa ajjeechaa Haymaanoot Badhaadhaan…
Ganna kana dareewwan barnootaa dabalataa 30,000 ijaarramaa…
Yuunivarsiitiin Walloo fi Dabra Taaboor barattoota digirii…
Bara baajata 2013tti dargaggoota kuma 200 fi kuma 80f carraa…
Naanno Affaaritti balaa lolaa laga Awaashiin namoonni kuma…
Oduu biyya keessaa2334